Filtrer les éléments par date : mardi, 22 décembre 2020
mardi, 22 décembre 2020 20:31
Pilo kely : Ialao ity manipy fako eny ambony fiara ity e
Misy aza ny manisin-delo sy mandrora, misy olona manana 4x4 vitre électrique raitra be nefa dia manary fako amin'ny arabe, nefa avy eo mimenomenona fa tondraka ny rano, ka io canal io moa natao anariana fako?
mardi, 22 décembre 2020 19:16
Farafangana : Zandary manamboninahitra nentin’ny hamamoana nandratra olona tamin’ny fiara nentiny
Zandary kapiteny iray miasa ao Farafangana no nandona lehilahy iray mpitari-posy tamin’ny fiara 4x4 nentiny. Ny alin’ny 21 desambra 2020 no niseho ny loza, ary mamo ilay zandary nitondra ny fiara.
Tapaka ny ranjo havian’ilay mpitari-posy, vaky rà ny fihirifany. Nalefa notsaboina haingana ao amin’ny hopitaliben’i Farafangana ity farany.
Vaky ny jiron’ny fiaran’ny zandary sy ny « pare-choc », midika fa mafy ny dona.
Noraisin’ny Zandarimaria an-tanana ny fitsaboana ilay maratra.
Nesorina tamin’ny andraikiny notanany, ary nanokafana famotorana ilay zandary nahavanon-doza.
mardi, 22 décembre 2020 19:14
Ambodimadiro - Beronono : Nanafika andro atoandro ny dahalo, lasa ny basy, trano iray may
Notafihina andian-dahalo miisa 12 lahy nitam-piadiana toy ny basim-borona sy Kalachnikov tao Ampanetivala Fokontany Ambodimadiro, Kaominina ambanivohitra Beronono, Distrika Anjozorobe ny 21 desambra 2020, tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany tolakandro.
Nanapoaka basy ireo dahalo nampihorohoroana ny teo an-toerana sy nandrobana. Lasan’ny dahalo ny basim-borona 02 tao an-tanàna ary nisy trano iray nodoran’ireo jiolahy.
Nanao ny fanarahan-dia avy hatrany ireo Zandary miaraka tamin'ny Fokonolona maromaro mba hikarohana ireo olon-dratsy ireo.
mardi, 22 décembre 2020 17:44
Antenimieram-pirenena : Mpiasa 15 mianadahy handeha hisotro ronono
Nanokana fotoana hisaorana ireo mpiasa handeha hisotro ronono amin’ity taona 2020 ity ny Antenimieram-pirenena. Notanterahina teny Tsimbazaza, ny 21 desambra 2020, izany.
Naneho ny fankasitrahana ny asa vita rehetra ny Filoha Lefitra Razafitsiandraofa Jean Brunelle sy ny Sekretera Jeneraly Randriamahafanjary Calvin, ary nitsodrano azy ireo amin’izay adidy hafa mbola miandry.
Ny nisolo tena ireo handeha hisotro ronono kosa dia nanentana ireo mbola am-perin’asa hazoto hanatanteraka sy hanaja ny asa.
Nisy ny fanolorana takelaka mari-pankasitrahana sy fanomezana ho an’ireo 15 mianadahy mianaka ho mari-pahatsiarovana.
mardi, 22 décembre 2020 17:30
Akany Zandarimaria Arivonimamo : Nankalaza ny Noely 2020
Nankalaza ny Noely 2020 ny Akany Zandarimaria eny Arivonimamo. Notontosaina teny an-toerana ny marainan'ny 21 desambra 2020 izany.
Tonga nanome voninahitra izany ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka Komandin'ny Zandarimariam-pirenena (COMGN) sy Ramatoa Sahondra Ravalomanana Vadin'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, notronin'ireo manamboninahitra maro sy mpikambana ao amin'ny FIVAZA, ary ireo manankaja avy ao an-toerana sy Antananarivo.
Nanambara ny Jeneraly COMGN fa manao latsakemboka isam-bolana ny Zandary rehetra amperin’asa mba hampiodinana ity Akany ity. Tsy fiompina zaza ny Akany fa fitaizana sy fanabeazana mba ananan’izy ireo fahaleovantena any aoriana, ka hahatonga ho olom-banona azy ireo.
Takiana amin’ireo ankizy ny ezaka amin’ny fianarana sy ny fanarahana ny fitsipi-pifehezana.
mardi, 22 décembre 2020 17:25
Bemokijy – Morondava : Hazo voarara notaterina an-tsokosoko
Saron’ny Zandary ny 16 desambra 2020 ny hazo voamboana (palissandre) notaterina an-tsokosoko. Hazo miisa 13 mirefy 2 metatra avy no tratra tao Bemokijy Fokontany iray ao amin’ny Kaominina ambonivohitra Morondava, Faritra Menabe.
Nitsoaka ny tompony ary karohina ; ireo hazo kosa nogiazana avy hatrany.
Tafiditra anatin’ny sokajin’ireo hazo voarara tsy azo kapaina, taterina na amidy ny voamboana.
mardi, 22 décembre 2020 17:22
Ambohiborona-Faratsiho : Gadra tokony hamita sazy any am-ponja mbola nanao fanafihana mitam-basy
Valo mianaka maty tsy tra-drano, may tao anaty trano nodoran’ny dahalo, lehilahy iray hafa saika hamonjy iretsy may trano ihany koa, no maty voatifitra. Ireo no vokatry ny fanafihan-dahalo tao Ankidaondrano Kaominina Ambohiborona, Distrikan’i Faratsiho, Faritra Vakinankaratra ny alin’ny 18 desambra 2020.
Andian-dahalo ampolony mitam-basy sy zava-maranitra no nanafika.
Olona manana olana ara-pitsarana amin’ireo fianakaviana namoy ny aina ireo, ary notsaraina tao Antsirabe ny volana novambra 2020 no nahiahiana ho nahavanon-doza. Misy gadra any am-ponja ao Antsirabe, ary mbola tokony mamita sazy aman-taonany ny sasany amin’izy ireo.
mardi, 22 décembre 2020 13:56
Ikelivondraky – Ihosy : Tra-tehaka ireo dahalo saika handrava omby miisa 75
Dahalo valo lahy miampy lehilahy iray mpiray tendro amin’izy ireo no tra-tehaky ny Kalôny sy ny Kartie mobila nanao fisafoana amin’ny alina raha nikasa hangalatra omby miisa 75 tao Ikelivondraky, Kaominina Ambatolahy, Distrika Ihosy ny alin’ny alahady 20 desambra 2020.
Nitondra basim-borona sy zava-maranitra ireto olon-dratsy ireto tamin’izany.
Efa eo ampelan-tanan’ny Zandary avokoa izy sivy lahy ireo, atao famotorana mialoha ny hanolorana azy ireo ny Fampanoavana ao Ihosy.
mardi, 22 décembre 2020 13:54
Maromitety-Vavatenina : Vavikely 12 taona norahonana tamin’ny “coupe-coupe” ary saika voaolana
Lehilahy iray fantatra amin’ny solon’anarana hoe: “Lin” no voasambotra tao Ambodimanga Sahavaviana Kaominina Maromitety, Distrika Vavatenina raha nikasa hanolana zazavavy kely 12 taona, ny tolakandron’ny 16 desambra 2020.
Norahonan’i Lin hovonoina tamin’ny “coupe-coupe” raha tsy manaiky ny filan-dratsiny. Ny anadahin’ilay zazavavy izay niara-dalana taminy no niezaka nitsoaka ka nampandre ny olona ny zava-mitranga.
Efa niborotsaka ny patalohan’i Lin no tratran’ny olona tao anaty kirihitr’ala handeha hanolana ilay zazavavy izy.
Notazomin’ny Zandary avy hatrany ilay mpanolana natao famotorana, ary natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Fenoarivo Atsinanana.
mardi, 22 décembre 2020 07:02
Météo 22 décembre 2020
(Photo Satellite 6h30)